2018 – Vanoda Zvinhu
Kusvirana nyoro na ex wangu Dorothy musango. Dorothy aive bhebhi rechidiki murefu mutsvuku aive neheavy dako. Takadanana kwe more than a year achibva aenda kubotswana ndokunoita makore 5 ariko. Ailavha kusvirirwa musango zvisingaite. By th tym yaakadzoka sango redu😀😀😀😀rakange ravakwa dzimba bt still aitoda kuti titombosvirana futi musango. Takatsvaga rimwe
Ndakanyatsovhura gumbo ndichikwizirira kabeans kangu ndainyatsonzwa magetsi akubakaa,ndapadhuze nekutunda ndikanzwa………. . sorry muzukuru ndanga ndichida kugadzira light randanzwa nambuya vako kuti rakatsvaa.vakadaro Sekuru vangu vachiramba vakatarisa beche rangu iro ranga ratonuniraa zvaroo Ndakasimuka zcemunhu ane hasha akanganiswa kuzvitundira ndikavabata trouse,I didn’t want to waste time coz ndaive nezemo karee,ndakavabata trouse
On March 21, 2018 May 23, 2018 By svirorist
Yakachecheudzwa hachisi chinhu,asi zvaazvinhu 💃🏻💃🏻💃🏻………………Masvirirwo andakaitwa nemboro yakachecheudzwa Ndaive ndane 3 years nababa jnr taive nemwana wedu 1 aive ne2 yrs, all this while taingoita romance yekubatana chete kana yaba jnr yamira inio ndatoterera chototsva,pandakazopindao grup repaApp remadzimai ndakatanga kungonzwao vanhu vachiti hee kudyiwa beche kunonaka kudya mboro wat wat
Categories : Dzesviro MipikichaLeave a comment
On February 22, 2018 By svirorist
Threesome netumababie tumaSouth Africans kuno Joni! Ndaigara muJoburg apa ndainge ndava ne 6 months ndatanga kushanda. Mari ndainge ndainayo kare zvekuti pandikatanga kushanda ku IT department ndichishandira FNB ndakatenga kamota kangu kekuti ndiwane chekufambisa ka Audi A4. Mumwe musi I was assigned kuyenda to fix some problem ku Centurion bank